एउटा डोरीको सहारामा सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने हरुलाई यो त केही पनि हैन होला? (रोचक भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
एउटा डोरीको सहारामा सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने हरुलाई यो त केही पनि हैन होला? (रोचक भिडियो सहित)
नेपाल – बेलायत सम्बन्ध नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बीचको वैदेशिक सम्बन्ध हो । बेलायत र नेपालको सम्बन्ध इतिहासदेखि मैत्री सम्बन्ध थियो र दूइ देशको राजपरिवार वीच पनि निकट सम्बन्ध थियो । ऐतिहासिक घटनाक्रम र विकास निर्माणको परियोजनामा सहयोग तथा गोर्खा सैनिक जस्ता कुराले नेपाल बेलायत सम्बन्ध विशेष रहने गर्छ । बेलायतमा अहिले निकै धेरै मात्रा नेपालीहरुको बसो बास पनी सुरु भएको छ । नेपालमा जस्तै मन मोहक दृश्य डाडा काडा पाखा पखेरी हरियाली प्राकृतिक सुन्द्र्यले भरिपूर्ण भएको देश हो बेलायत। यस ठाउमा संसार भरीबाट पर्यटकहरुको आउने कर्म जारि रही रहन्छ। हुन त् हाम्रो देश नेपाल भन्दा सुन्दर त कहाँ होला र फेरि पनि जहाँ रहे पनि त्यहि गाउ ठाउ रमाइलो लाग्ने यो प्राकृतिक स्वभावनै हो ।
पछिल्लो समयमा स्कटनेपाल अनलाइन टिभीले यस्तै यस्तै मन मोहक दृश्य डाडा काडा पाखा पखेरी हरियाली प्राकृतिक सुन्द्र्यले भरिपूर्ण पर्यटकिए क्षेत्रको जानकारी गराउने कर्म जारी देखिएको छ । आजको एक बिशेष यात्रा बर्मिङ्घमको सहर देखि २ घण्टाको ड्राइव गर्दै पुग्न सकिने एउटा यस्तो ठाउ जहाँ पुग्दा खेरि पक्कै पनि नेपालको याद दिलाउछ ।
हेरौ भिडियोमा विस्तृत जानकारी सहित :